The ákwà bụ a nkwupụta ka Islam | Apg29
The ákwà bụ a nkwupụta ka Islam
The ákwà na uwe-agba akaebe na ha bụ ndị Alakụba.
A girl yi a ákwà.
Mgbe na-eto eto Swedish inyom na-Alakụba, ha mgbe ahụ ngwa ngwa na Muslim shawl. Na ha adịghị eme nke a tupu ha bụ ndị Alakụba. The ịchafụ ma ọ bụ ákwà si otú ahụ ghọọ a nkwupụta na ugbu a ha bụ ndị Alakụba ma nwe Islam.
Ndị na-adị n'okporo ámá idaha
M na-ebi asatọ kilomita site Forserum. Na Forserum ndụ ọtụtụ ndị Alakụba. Mgbe m na-Forserum m na-ahụ kpọmkwem site ụgbọala m Muslim inyom na-eje ije n'okporo ámá. Ọ bụ a nkịtị n'okporo ámá idaha.
Olee otú m pụrụ maara na e nwere Muslim inyom? M na-ahụ ya na ha uwe. Ha nwere scarves na isi-ha na mbara uwe. Uwe ha na-agba akaebe ya mere na ha bụ ndị Alakụba.
M na-ahụ ndị mmadụ na-adịghị enwe ndị a uwe na, m na-eche ọ bụghị n'ihi na ha bụ ndị Alakụba. Na ndị ọzọ okwu, na uwe a nkwupụta na ha bụ ndị Alakụba. Ha na-egosi na ụwa na ha bụ ndị Alakụba.
Kpuchie ntutu isi ha na ha obi
Ọ na-ekwu na kor'an na Muslim inyom kwesịrị ekpuchi ntutu isi ha na ha obi na shawl ma ọ bụ ákwà. N'ihi na otú a na-egosi na ha bụ ndị Alakụba mere na ndị mmadụ na-agaghị dị ka Muslim website islam.se Esogbula ha. N'ihi ya Mmekorita ha. Ha ga-egosi na ha na-adịghị ma ọ bụ ndị ohu na-ekweghị ekwe na ọ bụ free n'ihi na ndikom emetụkwala na mmeko nwoke.
Quran: si na ụmụ nwanyị kwere na ha ga-belata ya anya na-eche onwe ha n'akụkụ na-adịghị na-egosi ndị ọzọ nke ha ịchọ mma karịa mma nwere ike ịbụ anya; Ka ha mere ise ha veils (Khimar) nke mere na ndị bosoms ...
Ọ bụ n'amaokwu a, nọmba 31 nke Quran na 24th isi, nke bụ ihe ndabere maka yi nke ákwà mgbochi ahụ. Mgbe Alakụba na-ekwu banyere amaokwu a kwuru banyere noun Khimar sụgharịrị dị ka "ákwà". Mohammed Knut Bernström dee ihe a na a odide ala ala peeji na amaokwu nkọwa ya nke Quran:
The noun Khimar (plur. Khumur) na-egosi ihe nkpuchi nke Arab inyom tupu mgbe biakwa obibia nke Islam na akụkọ ihe mere eme nwere omume attaching ntutu. Dị ka kasị kpochapụwo nkọwa eyi ákwà ọzọ ma ọ bụ obere ornamental, loosely nghọta ala azụ na n'ihi na ụmụ nwanyị n'uwe n'okpuru mgbe agbasokarị ejiji gụnyere a n'ihu décolletage ndụ, bụ bust akụkụ mmanya. Ndị inyom na-jụrụ ebe a mere izochi ya na enyemaka nke a Khimar.
ekpuchi gị isi
Otu nke ndị oge gboo nkọwa dị ka Bernström banyere bụ Ibn Kathir (d. 1373) na-akọwa okwu Khimar-anọchi anya ihe na-ekpuchi na na na-na-ekpuchi isi. Itinye ihe nkpuchi pụtara dọpụta ya gburugburu na-eme ka ọ dị mma. Nke a ga-eme ihe karịrị n'olu ma obi nke mere na ọ dịghị ihe nwere ike hụrụ ha. Ibn Kathir nwekwara kwuru ihe onye amụma nke Islam Muhammad nwunye 'A'ishah:
Ka Chineke amara n'elu ndị inyom nke n'oge emigrants. Mgbe Chineke kpughere amaokwu: 'Ka ha mere ise ha veils ikpuchi n'obi' ha dọwara ha bodices na-etinye na ha.
The nzube nke ákwà mgbochi na Muslim uwe bụ na ha na-adọta uche. Ma m na-ekwu na ọ bụ na-abụghị. My anya na-adọta ozugbo na dị iche iche uwe na veils site Muslim inyom na-eyi. Ha si dị ìgwè mmadụ ahụ.
Ka ibelata ga-e weere na ezi na a ọnụ ọgụgụ nke na ọnọdụ na a ga-zutere. Ndị a gụnyere:
Ọ ga-ekpuchi dum ahu, dị ka a kọwara n'elu.
O kwesịghị ịbụ ihe ịchọ mma n'onwe ya. The upholstery Na ọzọ okwu, adịghị ise achọghị anya onwe ya, nke N'ezie bụ otu n'ime ihe ọ pụtara nke amaokwu 24:31.
The uwe ekwesịghị ịbụ uzo.
Ha kwesịrị ịbụ rụrụ ma ghara Dodge nke ọzọ nke mere na ha na-egosi ahụ iche ma ọ bụ na-esi ísì.
Ha ekwesịghị yiri ndị uwe ma ọ bụ uwe nke disbelievers.
The nwoke si uwe
The enyi Abu Umamah gwara m na ọ nụrụ amuma Muhammad - udo n'elu ya - sị:
Ekwe nkwa m isii ihe na m ga-ekwe nkwa na ị Paradise: mgbe otu onye n'ime unu na-ekwu okwu, ọ ga-edina; o nyefere ihe ọ ga-arara na tụkwasịrị obi; ma ọ bụrụ na ọ na-eme a nkwa na ọ gaghị emebi ya; belata anya gị; Egbochila gị aka ma na-echebe gị onwe [ahụ] akụkụ.
Dị nnọọ ka e nwere iwu maka otú inyom uwe kwesịrị iji ezi, e nwekwara ndokwa maka nwoke attire. Ndị a gụnyere na ha na-ekwe (halal), nke pụtara ihe atụ na ha ekwesịghị mere nke silk ma ọ bụ na-ebu gold mgbe abụọ ndị a ihe na-debeere ndị inyom. Ha ga-agaghị mkpa ma ọ bụ uzo, ya mere ha na-egosi otu n'ime akụkụ ahụ mannan dakọtara (awrā '). Ha ekwesịghị iṅomi disbelievers uwe na ya na-atụ aro (mustahabb) na-eyi na-acha ọcha uwe. Ke adianade do, ọ na-machibidoro iwu na-eyi uwe na eguzo na ndị dị otú ahụ n'ụzọ ha na-adọrọ anya ha onwe ha ma na ụgbọelu bụ ma ama na ma ama n'ihi na ya.
Obere ụmụ yi veils
Ha na-ekwu na mgbe ụmụaka na-abata na-eto eto, ha na-eyi ndị a veils, ma m na-ahụkarị-eto eto ụmụ na-eyi veils. N'ụzọ dị otú a, umu aghọwo iko na-azọrọ n'echeghị na Muslim okwukwe.
Mgbe na-eto eto Swedish inyom na-Alakụba, ha mgbe ahụ ngwa ngwa na islam ịchafụ. Na ha adịghị eme nke a tupu ha bụ ndị Alakụba. The ịchafụ ma ọ bụ ákwà si otú ahụ ghọọ a nkwupụta na ugbu a ha bụ ndị Alakụba ma nwe Islam.
Mona Sahlin na Lena Hjelm-Wallens scarves
On September 11, 2001 hụrụ egwu-eyi ọha egwu na United States na gburu ruo 3,000 America na-kere ihe jọgburu onwe ya agha. Mgbe mere Government òtù Mona Sahlin na Lena Hjelm-Wallen n'ime a Swedish ụlọ alakụba na scarves n'isi-ha. Nke a iwe iwe n'ezie na ọtụtụ ndị na ike iyi ka ihe na-apụghị ịghọta omume.
Lee foto: Mahmoud Aldebe, Lena Hjelm-Wallen na Mona Sahlin mgbe 11 September na a nleta a na ụlọ alakụba .
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị, ọ bụghị n'ihu conspiratorial, ọ eleghị anya gaa na-egosi nkwado ha, ma n'ihi na ugbu a na shawl bụ a nkwupụta nke Muslim okwukwe, nke anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu na n'isiokwu a, nke bụ ha scarves ihe ọ bụla ma a kwupụtaranụ na Muslim okwukwe!
Gịnị ka i chere Alakụba na-eche echiche mgbe ha hụrụ abụọ shawl chọrọ mma òtù nke ọchịchị? Ha chere na ha bụ ndị Kraịst? Ma ọ bụ zoro ha ndị Alakụba? Ha mmanya àmà site shawls na ha bụ ndị Alakụba.
Àmà na Mona Sahlin bụ Muslim
Ma nke bụ eziokwu bụ na e nwere ihe àmà, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ a ndumodu na Mona Sahlin bụ n'ezie a Muslim. Nke a na-agba akaebe na-abịa site Muslim nwaanyị Nalin Pekgul n'ihu a ntụli aka:
"Otu onye Mona Sahlin, ihe atụ, na ọ ga-nne Mmetụta ọzọ Tensta n'ihi na ị na-eche na ọ bụ guarantor nke ndị ruuru ndị ọzọ na-na mba a karịa ikekwe ọtụtụ ndị ọzọ na Alakụba bụ ndị ga-dịghị mgbe nne Mmetụta."
My obi ike. na:
"M nnọọ obi ụtọ na ọ na (Sahlin) n'elu ndepụta n'ihi na m kwere ya, m nwere ike na-ere ihe ọ bụla ego na Tensta, ma eleghị anya, m ga-adịghị ere ihe ọ bụla ọzọ Alakụba ke otu ụzọ"
My obi ike.
State Gị na Iran na 2017
Na njikọ na gọọmenti nleta Iran na February 2017 rụrụ nne ozi ákwà. Nke a n'ezie bụ nnọọ iju nyere na nwanyi sonyere ná mba ndị ọzọ 'ala nleta bụghị nnọọ mkpa ime otu ihe ahụ.
Lee foto: Ozi nke shawls.
N'ihi ya, ọ bụ ihe pụrụ iche na Swedish mbon. Nke a bụ ihe ọ bụla karịrị ngosipụta nke obi ebere ma ọ bụ otuto? Ọ a nkwupụta na Muslim okwukwe?
Ann Linde ákwà na-ekpughe ya iwu
The ugbu a mba ọzọ ozi Ann Linde of Commerce nke yi ákwà na Iran gaa 2017.
Ọtụtụ ṅụrịrị ọṅụ n'ezie na ozi ọma na Margot Wallström ga arụkwaghịm, ma ọṅụ bụ obere ezu nyere na Commerce Ann Linde eftertädde ya.
Ọ bụ na ndị nleta Iran na February 2017 na ekedịbe onwe ha (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) tinyere ihe ndị ọzọ ndị inyom na-eje ozi. Ịtụle na o weere ákwà otú a na-enye ndumodu na ọ bụghị ele mmadụ anya n'ihu na esemokwu n'etiti Israel na Palestian Authority.
Ọ bụ na-megide Middle East nanị ochichi onye kwuo uche, Israel na-aga na ya ụzọ Margot Wallström nzọụkwụ.
2011 họpụtara Palestian Association Ann Linde "afọ Palestine" ndị na-esonụ na nkwupụta:
Ann Linde, site na ha na-arụ ọrụ na nraranye, njem ya na Palestine na Israel, ha na kọntaktị na mkparịta ụka abụọ ọzọ, mesiri Palestinians 'ọnọdụ lucidity, doo anya na obi ike, kasị nso nso dị ka ude nke East Jerusalem dị ka isi obodo nke a ga-eme n'ọdịnihu Palestian State na ude nke Palestine dị ka otu nọmba 194 nke UN. Ann Linde si mgba udo na ikpe ziri ezi mgbe nile a na-elekwasị anya iwu mba na oke ruru mmadu kwuru.
The ákwà na-ekpughe ihe ọ bụ Middle East iwu, ọ azụmahịa na-akpali akpali. Ya mere, ebe o kwuru na a ochichi onye kwuo uche N'ezie na Tel Aviv na 2008:
"The esemokwu n'etiti Israel na Palestine, ebe ndị kasị mkpa ị ga eme maka udo bụ na Israel na-arụ na-agwụ, a bụ isi ihe na dum Middle East nwere ike mepụtara na a udo direction."
Rịba ama na ọ na-ekwu banyere "Palestine" dị ka a obodo ugbua na 2008, afọ abụọ tupu ndị na-elekọta mmadụ onye kwuo uche ọchịchị ghọtara na ọ dị ka a na mba, ọ bụ ezie na ọ bụghị a na mba.
The ákwà nwere ike agaghị azọpụta gị
Na Tehran, Iran ghọrọ a nwaanyị na 2018 ikpe afọ abụọ n'ụlọ mkpọrọ, maka Muslim na mpụ na- n'ihu ọha wepụrụ ya ákwà . Na ọnwa abụọ jidere 30 inyom na ahịhịa na ha jụrụ na-eyi ákwà.
The iwu na yi nke ákwà mgbochi ahụ ma Muslim na-abụghị Muslim inyom na Iran anọwo na ike ebe ọ bụ na ọbara islam mgbanwe 1979th
Ka m kwuo ya n'ụzọ doro anya: ákwà nwere ike agaghị azọpụta gị. Kama nke ahụ, ọ bụ ụzọ na-emegbu na merie gị, ma ị bụ Muslim ma ọ bụ.
The naanị otu na ike ịzọpụta n'ezie ị na-etinye gị kpamkpam free bụ Jizọs Kraịst.
Chineke hụrụ gị n'anya
Chineke hụrụ ihe niile ndị mmadụ, ma ọ dịghị ákwà nwere ike ma chekwaa ma ọ bụ na-amasị Chineke. I kwesịrị-azọpụta ma na n'ezie biko Chineke, mgbe ahụ i kwesịrị anabata Ọkpara Ya Jizọs Kraịst bụ onye ọ na zitere n'ime ụwa na-anwụ anwụ na a cross-azọpụta gị.
Jesus dị ndụ taa - ọ na-bilitere site na ndị nwụrụ anwụ. Mgbe ị na-anata Ya na ị ga-azọpụta ma free. Jesus Christ n'ezie na-esetịpụrụ ndị free.
The Bible na-ezo aka na ákwà ma ọ bụ shawl, ma na nke a na-ekwu, o doro anya na ọ dịghị iwu na-enweghị omenala. Jizọs mere ka ndị mmadụ free, ọ bụghị n'ihi na ha na-otu ugboro ọzọ a ga-etinye na n'agha, ma na ha anọgide na free.
Mona Sahlin ghọrọ ka Islam?